BRAVE water festival - amazingyangon
Home /BRAVE water festival
April 13, 2018 @ 2:00 pm – April 16, 2018 @ 6:00 pm
EDM Festivals-Myanmar No.1(B)/13(B)/Yuzana Plaza အနောက်ဖက်ခြမ်း၊ဂန္ဓမာ(၆)လမ်း ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်
🎫 Early Bird Ticket Available 🎫
Brave ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက် Brave Water Festival 2018 💦💦 ရဲ့ Early Bird Ticket တွေကို နေ့ခင်းဖက်ရော ညဖက်ပါ ၀ယ်လို့ရပီနော်။ 📢📢
🎟Early Bird GA – 30000 Ks
🎟Early Bird VIP – 65000 Ks
မှာယူလိုသူများ အ​နေဖြင့်​ 📩
3> ပွဲအမည် (#TMF,#BlackJack,#Barrack)
စသည်​တို့ကို ဖြည့်​​ပေးပြီး Message Box က​နေ Message ​လေးပို့လိုက်​ရုံဘဲ​နော်​ 💓💓
🤙09 9600 900 78 (24hours)
No.1(B)/13(B)/Yuzana Plaza အနောက်ဖက်ခြမ်း၊ဂန္ဓမာ(၆)လမ်း
🚌With bus STOP: လမ်းကျယ်ပလာဇာမှတ်တိုင်မှာဆင်းပါ ပြီးရင် ရွေငါးတိုင်းပြည်တိရစ္ဆာန်ရောင်းတယ့်လမ်းကိုဝင်ပြီး တည်တည်ပါပဲ
🤙90’s BAR YGN
🚚 #GAနှင့်VIP Ticket များကို
အိမ်အရောက် Delivery Service အတွက်
#FREE_DELIVERY ဖြင့် အိမ်အရောက်ပို့ပေးမှာဖြစ်တယ် နော် အချိန်ကုန်သက်သာ ပြီး လူပင်ပန်းစရာမလို ပဲမှာယူလို့ရပြီးနော်🚚
🚨🛵ရန်ကုန် – မန္တလေး အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်
These event ticket are available in EDM Festivals Myanmar.
#BraveWaterFestival2018 #WavePlusMyanmar #BraveEntertainment
The RAVE COLOUR & FOAM FESTIVAL
Yangon Zay, Thingyan Edition
နှစ်စဉ်မပြတ် စည်ကားစွာ ကျင်းပလျက်ရှိသော ရေကျော်ပွဲဈေး ဒီနေ့မှာပဲ စတင်ပြီဖြစ်တာမို့ ရန်ကုန်ရဲ့ သတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော် နှင့်အတူ ပွဲဈေးလျှောက်ရင်း မုန့်တွေစားမယ် ဓာတ်ပုံတွေရိုက်မယ် ရဟတ်စီးချင်သူတွေကို သတင်းကောင်းလေး လက်တို့လိုက်ပါတယ်။ ရေကျော်ပွဲဈေးရဲ့ ပုံများ သတင်းများကိုလည်း မပြတ်တင်ဆက်သွားပါမယ်။ သူငယ်ချင်းတွေလည်း သိအောင် share ပေးလိုက်ကြပါအုံးနော်… 🎸🎸🎸ရန်ကုန်ရဲ့ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပိုမိုသိဖို့ amazingyangon.com Page ကို Like & Share လုပ်ထားလိုက်ပါ။ The post ရေကျော်ပွဲဈေးကို ချစ်သူနဲ့ တူတူလည်မယ် appeared first on amazingyangon.
FAB HALLOWEEN Sat Oct 27th 10PM till late Dj MiK3 Club Pyrite Find Pyrite near Inya Lake Hotel – entrance next to L’Opera Restaurant The post We’re back for our yearly queer halloween party. Dress to scare! appeared first on amazingyangon.